वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : September 2010
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ September 27, 2010
गत असोज ४ गते सोमबार बा हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो| म यतिखेर परिवारका साथ उहाँको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै शोकलाई सहने र धैर्यधारण गर्ने प्रयासमा छु|यसैकारण केहि समय ब्लगमा नियमित हुन् नसक्ने ब्यहोरा पनि सविनम्र जानकारी गराउन चाहन्छु|
“गुँड” सर्दा-सर्दै यतिखेर म एउटा क्याम्पसको शिक्षक-कर्मचारी आवास क्षेत्रको एउटा घरमा आईपुगेको छु। जापान जानुअघि पनि यहिँ बस्थें, घर भने फरक परेको छ।कुनै शुक्रवार साँझबाट यो गुँडमा पोका-पन्तरा सार्ने योजना थियो र त्यसै दिन बिहानबाट सरसफाई थालियो। चालीसको दशकको शुरुतिर बनेपछि सबै आवासगृहहरुमा कुनै गतिलो मर्मत-सम्भार गरिएको छैन। यसैले धेरैजसो आवास-गृहहरुको हालत ठीक छैन। पानी चुहिने, भित्ता चर्किने, ड्रेन बिग्रेका, अधिकाँश बत्तीहरु नबल्ने आदि समस्याहरु छन् धेरैमा। सरकारी सम्पत्तिको कत्ति पनि माया नगर्ने नेपाली बानीका कारण धेरैजसो फर्निचरहरु पनि बिग्रिसकेका छन्।, दुई दशकभन्दा बढी प्रयोग गरेपछि धेरै कुरा पुराना हुनु, बिग्रिनु स्वाभाविक हो तर लापर्वाहीपूर्ण प्रयोगका कारण बिग्रिनै नपर्ने कुराहरुको पनि अवश्था ठीक छैन धेरै आवासहरुमा। भन्न पनि लाज लाग्छ, कतिपयले छोडेर जाने बेला आवासगृहका सामानहरु बोकेर हिँडेका घटना पनि भेटिन्छन्।सौभाग्यवश यो आवासगृह भने तुलनात्मक रुपमा राम्रोसंग स्याहार-सम्भार गरिएको भेटियो। यो घरमा पहिला बस्नुहुनेहरुसंग राम्रो परिचय छ हाम्रो। यहि घरमा लगभग बीस वर्ष बस्यो होला उहाँहरुको परिवार। उहाँहरुको स्वभावको आधारमा आफू निराश हुनुनपर्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ, हुनुपरेन पनि। उहाँहरुले नफ्याँकी हिँडनुभएका पूराना किताब, पत्रिका र जुत्ताहरुका थुप्रा भने ठूलै थिए। एक वर्षदेखि लगभग खालीजस्तै रहेकाले फोहर, माकुराका जाला, धूलो आदि पनि प्रशस्त जम्मा भईसकेको रहेछ।माथिल्लो कोठा सफा गर्ने क्रममा किताब–याकका फोहर पन्छाऊँदा त्यहाँबाट एउटा मूसो निक्लेर खुर्र दौडियो र तलतिर लाग्यो। पहिलाको आवासमा पनि मूसाहरुले दु:ख दिएका थिए, यहाँपनि दु:ख पाईने भयो भन्ने लाग्यो।नभन्दै साँझबाटै मूसाहरुको ‘खेलकूद’ शुरु भयो। एक वर्ष देखिको आफ्नो एकछत्र राजमा ‘अतिक्रमणकारी’हरु पसेकाले उनीहरु धेरै रिसाएका पनि होलान्:) रातभरि मूसाहरुले भाँडाकुँडा बजाए, लडाए र पस्न सकेजति ठाऊँमा उनीहरुले आफ्ना लिँड उपहार पनि छोडेर गए। ‘भोलि नबिर्सिकन मूसाको विष वा खोर किनेर ल्याउने’ घर सल्लाह भयो।तर बिर्सियो। नयाँ गुडँमा ब्यबश्थित हुन धेरै किनमेल गरियो तर धेरै दिनसम्म त्यहि मूसाको औषधि किन्न भने बिर्सिरहियो र रातभरि मूसाहरुको ‘खेलकूद’ र ‘कन्सर्ट’ बाट ‘आनन्द’ पाउने क्रम जारी रह्यो।मूसाहरु धेरै भएको स्पष्ट थियो तर सधैं बाहिर देखिने उनीहरुको प्रवक्ताजस्तो एउटा ठूलो मूसो थियो। यो माऊ मूसो पनि हुनसक्छ। एकदम निडर लाग्थ्यो यो मूसो। टक्क रोकिएर हामीतिर हेर्थ्यो र नडराई हामीसंग आँखा जुधाऊँथ्यो यो मूसो। यसरी टाउको ठड्याएर चुनौतीका साथ हामीलाई आँखा तर्ने मूसो गणेशको वाहन नभएर गणेशका बाकै बाहन हुनुपर्ने, कसरी मूसो भएर जन्मिएछ बजिया! धरोधर्म! यो मूसोलाई देख्दा मलाई जहिलेपनि गजधुम्म बाटो छेकेर बसीरहेको साँढे देखेजस्तो लाग्थ्यो।मूसाको विष किन्न लगातार बिर्सिरहेपनि सुत्नुअगाडि खानेकुराहरु मूसाले नभेट्नेगरी राख्न भने बिर्सिने कुरा भएन। साथै महत्वपूर्ण किताबहरु, लुगाहरु आदि पनि जोगाउने मेसो गरियो। सुत्ने कोठाको ढोका राम्ररी ढप्काए मूसा पस्न नसक्ने रहेछ। बैठक कोठा र भान्छाका ढोकाहरु ढप्काएपछि पनि मूसाहरुको आवतजावत रोकिने रहेछ। तर मूसाहरुको एउटा गुँड भान्छाको ठूलो –याकको पछाडि भएको कुरामा कुनै शंका थिएन। त्यो –याकको पछिल्तिर फोहर राम्रैसंग जम्मा भएको छ, त्यता सरसफाई गर्ने साईत अझै जुरेको छैन। त्यो –याक ‘एकदमै गह्रौं’ भएको निहुँ पारेर आलटाल गरिराखिएको छ अहिलेसम्म। ढोकाहरु सबै राम्रोसंग बन्द गर्दा बढीमा बाहिरका मूसा बहिरै र भित्रका मूसा भित्रै हुने थिए होलान्।दोश्रो तल्लाको सानो चाहिँ कोठामा बसेर केहि गर्दै थिएँ एक साँझ, ढोका खुल्लै थियो। अलिअलि स-याकसुरुकको आवाज आयो र पछाडि हेरेको, चुनौतीका साथ आँखा जुधाउन उपश्थित थियो उहि ‘साँढे’ मूसो! यो मूसो तल-देखि माथि पूरै घर चहार्दो रहेछ।हामीले ढोकाहरु सबै राम्ररी बन्द गरेर सुतेपछि मूसाहरुलाई साह्रै रिस उठेछ कि क्या हो, ढोकामै ‘नारा लगाउन’ र ‘तोडफोड गर्न’ थाले। राति मूसाले ढोका अगाडि केहि चिज कुटुकुटु काटेर निदाउन दिएन। ढोका खोलेर हेर्दा मूसो खुरुर्र भागिसक्थ्यो र देखिन्थ्यो मूसाले गरेको तोडफोडको नतीजाको रुपमा काठका साना-मसिना टुक्राहरु। आवासका ढोकाहरुमा काठमाथि एकपत्र पातलो प्लाई (?) टाँसिएको रहेछ र पूरानो हुँदै गएपछि त्यो प्लाई कतै-कतै उप्किन थालेको रहेछ। त्यहि प्लाई काटेर बस्दो रहेछ मूसो रातभरि। कुटुकुटु आवाजले असैह्य भएपछि ढोका खोल्ने र मूसो लखेट्ने क्रम जारी रह्यो केहि रात।कोठामा सरेको पाँच दिनपछि बल्ल आईपुग्यो मूसाको विष। त्यो विष खाएपछि मूसो घर बाहिर गएर मर्छ भनेर लेखिएको थियो संगैको कागतमा। झट्ट हेर्दा साबुनजस्तो देखिने विषादि आठ टुक्रा पारेर प्रयोग गर्ने निर्देशन पनि लेखिएको थियो। ती टुक्राहरुलाई भान्छा, ढोकाहरुका अगाडि, भ-याङ्गमुनि आदि गरेर छरेर अलिक ढुक्कको सास फेरेर सुतियो।राती मूसाहरुको ‘गतिबिधि’मा खासै कमी भने आएन। भोलपल्ट बिहान हेर्दा विषादिका सबै टुक्राहरु गायब भैसकेका थिए र ठाऊँ-ठाऊँमा मूसाका हरिया लिँडहरु देखिए, विषादि खाएपछिको असर होला शायद हरियो लिँड।त्यो दिनबाट ‘साँढे’ मूसो देखिन छाड्यो।‘साँढे’ नदेखिएपनि मूसाहरुको जुलुश भने ठूलै बाँकी रहेजस्तो लाग्यो। ढोका काट्ने काम अब तल्लो तल्लामा मात्रै बाँकी रह्यो। भ-याङ्ग चढेर माथिल्लो तल्लासम्म आउने ‘आँट’ शायद ‘साँढे’ मूसोमा मात्रै थियो:)त्यो –याकको प्रयोग नगरिएको एउटा घर्रा सफा गर्दा अर्को मूसो निक्लियो र बैठक कोठातिर पुगेर बिलायो। यो मूसो धेरै पटक बैठक कोठातिर बिलाएकोले मूसा भित्र-बाहिर गर्ने प्वाल होला त्यो कोठामा कतै भनेर धेरै खोजियो तर पत्तो लागेन।अर्को एक पोको औषधि पनि भित्रियो घरमा।यो दोश्रो पोकोलाई टुक्र्याएर छरेको भोलिपल्ट दिऊँसो एउटा सानो मूसो भान्छाको –याकसंगैको झ्यालमा ऊँघेर बसिरहेको थियो। विषको असर हुनसक्छ। त्यति शक्ति नभएको देखेर उसलाई बढार्ने र डष्ट कलेक्टरमा हालेर बाहिर फ्याँक्ने विचारमा पुगें म। केहि घण्टामा त्यो मूसो बाहिरै मर्ने थियो। तर मैले उसको नजिक कूचो लानासाथ मूसो ज-याकजुरुक उठेर टाप कस्यो र –याकमुनि पुग्यो।त्यो साँझ लोडशेडिङ्ग थियो र म घरमा एक्लै थिएँ। त्यो ‘बिरामी’ मूसोलाई निकाल्न र लखेट्न मैले धेरै कोशिश गरें। धेरै बेरसम्म –याकमुनि रड घुमाईरहें, तर मूसो निक्लेन।भ-याङ्गमुनि ध्यान दिएर हेरेको, मूसाले प्वाल बनाएको रहेछ। केहि दिनअघि भ-याङ्गमुनि त्यस्तरी युद्धस्तरमा सफा गर्दा पनि यो देखिएनछ। भ-याङ्गमुनि सधैं अँध्यारो हुने, त्यसैले होला। अहिले बत्ती नहुँदा ईमर्जेन्सी लाईट बोकेर त्यता गईएछ र प्वाल देखियो। मूसाहरु बैठक कोठामा होईन, यतै आएर बिलाउँदा रहेछन्।भ-याङ्गमुनिको प्वाललाई ईँट्टाका टुक्राहरुले टालटुल पार्ने कोशिश गरें मैले र फेरि भान्छातिर फर्किएँ। भान्छाको एक छेऊमा ‘बिरामी’ मूसो अल्मलिईरहेको थियो। पछाडिबाट सुटुक्क गएर एउटा मोटो लठ्ठीले जोडले थिचें एकछिन्। आर्तनाद गरिरहेको मूसोलाई त्यहि लठ्ठीले घिसार्दै ढोकासम्म लगें र हुच्चिएर बारीतिर हुर्र्याईदिएँ। पानी परीरहेको थियो, केहि बेरमै म-यो होला त्यो मूसो।दोश्रो पोको औषधिका आठ टुक्रा मध्ये दुई टुक्रा त्यतिकै बाँकी रहेछन्। त्यो रात र भोलिपल्ट बिहानसम्म तलको कोठाको ढोका काटेको आवाज सुनिँदै थियो, त्यसपछि सुनिएन। विषादिका बाँकी दुई टुक्राहरु पनि देखिएनन् त्यसको एक रातपछि।त्यसपछिका चार दिन घर बसिएन। फर्किएर आऊँदा पूरै घर डुङ्डुङ्ती गन्हाईरहेको थियो। तीनवटा मूसा मरेर कुहिन थालिसकेका रहेछन्। दुईटा ट्वाईलेटमा थिए र एउटा भान्छासंगैको स्टोरमा थियो। विषादिमा लेखिएको सही हो भने ‘मर्न’ का लागि खुल्ला ठाऊँ खोज्दा-खोज्दै त्यहाँ पुगेका होलान्, बाहिर निस्कने बाटो भेटेनन् होला। तीनलाई फालेपछि गन्हाउन छोड्यो।यतिखेर भने मूसाले दु:ख दिएका छैनन् तर एक हप्ताको मूसा आतंकले छोडेको प्रभाव भने ज्यूँदै छ। कतै केहि स-याकसुरुक गरेजस्तो लाग्यो कि मूसा आयो भनेर उठ्न र बत्ती बाल्न छोडेको छैन:) Posted by
तस्बिर साभार: नागरिक दैनिकहिजो कुशेऔँशीका दिन, पिताको मुख हेर्न भनेर हिँडेको म, नौ घण्टाभन्दा बढी जाममा परेर मध्यरातमा घर पुगें। नागढुंगाको नजिकै कतै गएको पहिरोले सिर्जेको जाम थियो त्यो।बसका अरु सबै पनि मजस्तै पिताको मुख हेर्न हिँडेका थिए; धेरैजसो बच्चासहितका महिलाहरु थिए। कोहि लिन आउला-नआउला, आएन भने के गर्ने- एउटा अन्यौल र त्रासको भाव थियो बसभरि। काठमाण्डौं छोड्न लाम लागेका र पस्न लाम लागेका दुबैतिरका गरेर हजारौंको संख्यामा थिए होलान् गाडीहरु, तिनमा सवारहरुको संख्या लाखौंमा पुग्यो होला सजिलै। रात छिप्पिँदै जाँदा त्यो अन्यौल र त्रासको भाव यसरी लाखौं मनहरुमा सघन हुँदै थियो।पहिरो छऊञ्जेल त रोकियो-रोकियो, पहिरो पन्छाएर बिस्तारै चलमलाउन थालेको सडकलाई फेरि थला पार्दिँदा रहेछन्, बीच-बीचमा ओभरटेक गर्ने र गलत दिशाबाट भएपनि आफू पहिला जान खोज्ने उपबुज्रुक चालकहरु। यस्ता खालका मान्छेको ताईँ न तुईँको अहंकार र अधैर्य मानसिकताका कारण अरु धेरैले अनाहकमा दु:ख पाउनुपर्छ। हिजोको जामको कम्तिमा चौथाई समय त यस्तै काईते भातमारा चालकहरुका कारण सिर्जिएको हुनुपर्छ।पहिरो पन्छिसकेर र माथि उल्लेख गरिएका नियम मिचुवाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले सही दिशामा सोझ्याइसकेर गाडीको लस्कर चल्मलाउन थालेको केहि छिनमा फेरि रोकियो। अर्को पहिरो खस्यो कि कतै भनेर शंका गर्दै थिए सबै, होईन रहेछ; उकालो चढ्दै गरेको कुनै गाडीको तेल सकिएछ र ऊ सबैलाई अलपत्र पारेर बाटैमा लम्पसार परेछ। ४५ मिनेटजतिपछि गाडी-गँड्यौला फेरि चलमलायो, तेलको ब्यबश्था भयो होला शायद। हिजो त तेलमात्रै सकिएछ, कहिलेकाहीँ यस्तै बेलामा गाडीनै बिग्रिदिन्छन् र बाटैमा लम्पसार पर्दिन्छन् एक-दुई दिन।मैले भोगेको यो नौ घण्टे जाम अरु कतिपय जामको दाँजोमा अझ छोटो हो। यो भन्दा धेरै लामो जाममा फँसेका रामकहानी धेरै सुनेको छु, धेरै साथीहरुबाट। हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावटमा पहिरो जानु स्वाभाविक हो। यस्ता पहिराहरु र जामहरु हरेक वर्षायामका हाम्रा साथी बनिसकेका छन, देशका सबै भेगका लागि। नीच राजनीतिक स्वार्थले जन्माउने जामहरुको अर्को अध्याय भने वर्षैभरि चलिरहन्छ। हामी यस्ता जाममा फँसी-फँसी 'अभ्यस्त' भईसकेका छौं।पहिरो जानु स्वाभाविक हो तर एउटा पहिरोले देशको गतिलाईनै ठप्प पार्नु बिल्कुलै स्वाभाविक होईन। वर्षौं यसरी पहिरोका कारण सिर्जिएका जामलगायतका समस्या र जनधनको अपार क्षति देख्दा-देख्दै, अनुभव गर्दा-गर्दै पनि हामीले अझै यसको दिगो समाधान भेट्न नसक्नु झन् स्वाभाविक होईन।पहिरोलाई द्रुत गतिमा पन्छाउन सक्नेगरी तयारी अवश्थामा रहनु जति आवश्यक छ, सडकनजिक पहिरो जानै नसक्ने गरी बेलैमा रोकथामका बिभिन्न उपाय अपनाउनु अझ आवश्यक छ। हामीसंग त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन, सडक यातायातको लामो अनुभव सँगालिसकेको छ देशले। मितब्ययितापूर्वक सदुपयोग गर्ने हो भने स्रोत-साधनको पनि खासै अभाव हुने छैन।समस्या समाधानको अर्को पाटो भनेको वैकल्पिक सडकहरुको निर्माण हो। सकिन्छ भने हरेक प्रमुख मार्गसंग समानान्तर हुनेगरी अर्को एक वा दुई मार्ग निर्माण गरिनुपर्छ। सामान्य अवश्थामा ती मध्ये एउटा हल्का सवारी साधनहरुका लागि र अर्को ट्रकजस्ता भारी सवारी साधनहरुका लागि तोक्न सकिन्छ। यसले सडकमाथिको अहिलेको अनियन्त्रित चापलाई कम गरेर सडकको आयु बढाऊँछ र पहिरोजस्ता प्रकोपका बेला विकल्प उपलब्ध हुन्छ। सडकको पूरै लम्बाईमा नसके केहि निश्चित संवेदनशील खण्डहरुमा मात्रै पनि त्यो ब्यबश्था गर्न सके पनि धेरै सुविधा हुन्छ।सात साललाई हामीले नेपाल आधुनिक युगमा पदार्पण गरेको प्रस्थान बिन्दू मानेका छौं। त्यस यता सडकका नाममा देशको पैसाको ठूलो खोलो बगाईसकिएको छ। ४६ सालपछिकै कुरा गर्दा पनि लगानी धेरै लागिसकेको छ। लगानीको अनुपातमा काम हुन सकको भए शायद देशभरि सुविधायुक्त सडक-संजाल बनिसक्नेथियो। तर हाम्रो दुर्भाग्य, सडक-निर्माण हाम्रो देशका नेता, प्रशाशक र प्राविधिकहरुको एउटा सिण्डिकेटको 'दुहुनो गाई' बनेको छ। सडक निर्माणको पक्ष हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरे भ्रष्टाचार हुनेमध्येको एक हो। यसैले हामी यस्ता जाम खपिरहन विवश छौं।हिजोको जाममै मैले सुनेको ठट्यौलीको भाषामा भन्दा हामी यस्तै 'जाम'संग मनको 'पाउरोटी' खाईरहन विवश छौं:)देशमा भईरहने यस्ता जामहरु, तिनमा फँस्ने लाखौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने शारीरिक-मानसिक कष्ट र जामका कारण खेर गएको देशको कार्यक्षमता र समय बुझ्न सक्ने संवेदनशील राज्ययन्त्र हामीसंग कहिल्यै भएन। प्लेन र हेलिकप्टर चढ्न सक्ने भएपछि हिजो आफूलाई हिँडाउने सडकलाई सजिलै चटक्क बिर्सिदिने कृतघ्न छन् हाम्रा नेताहरु, नीति-निर्माताहरु र प्रशाशकहरु। धिक्कार छ तिनको संवेदनाहीन मनलाई!र धिक्कार छ यस्ता संवेदनाहीन नेताहरु र प्रशाशकहरु जन्माउने र तिनलाई टाउकोमा चढाउने हामी नेपाली जनतालाई!
आफूले सुनेका/पढेका तर नभोगिएका परीवर्तनहरुसंग चिनजान गर्दैछु। सात वर्ष यसै पनि लामो समय हो, यो अवधिमा परीवर्तनको गति जतिसुकै मन्द हुने समाजमा पनि धेरै कुरा फेरिएको देखिन सक्छ। परीवर्तन भएका कति कुरा प्राकृतिक र स्वाभाविक हुन्छन्। धेरै चिनजानका ब्यक्तिहरुको निधन भईसकेको हुन्छ, धेरै नयाँ बच्चाहरु थपिईसकेका हुन्छन् समाजमा। आफू जाँदाका साना बच्चाहरु किशोर बनिसक्छन् र किशोरहरु बलिष्ट वयष्क बनिसकेका हुन्छन्। एउटा फरक परिवेश र स्थानमा बिताएपनि आफूले पनि यो अवधिमा बिताईएको उहि सात वर्ष हो, तर यो अवधिको परीवर्तनलाई प्रत्यक्ष देख्न नपाएको हुँदा कता-कता के-के अनौठो लाग्दो रहेछ। आफ्नो मनमा आफूले छोडेर जाँदाकै चित्र बाँकी हुँदो रहेछ र त्यहि चित्रका आधारमा सबै कुरा चिन्ने-खोज्ने निरर्थक चाहना पनि हुँदो रहेछ।हाम्रो देशका लागि यो कालखण्ड अझ विशेष रह्यो। यहि अवधिमा धेरै ठूला राजनीतिक परीवर्तनहरु भए।नयाँ परिवेशमा पुगेको आफ्नो समाज र देशसंग फेरि परिचय गाँस्ने क्रममा छु यतिखेर, अर्को शब्दमा अहिलेको ‘फेशनेवल’ वाक्यांश ‘नयाँ नेपाल’ संग चिनजान गर्दैछु। त्यो परिवेशमा आफ्नो ठाऊँ खोजिरहेछु र आफ्नो परिचय निर्माण गर्न खोजिरहेछु। भौतिक, मानसिक सबै हिसाबले एउटा संक्रमणबाट गुज्रिरहेछु।नेपालको जिन्दगी अप्ठेराहरुले भरिएको छ। अप्ठेराहरु हिजोपनि थिए, र आज अप्ठेराहरु नघटेका बरु झन् बढेको पाएँ मैले। वर्षौंको अस्थिर राजनीति र सीमाहीन मौलाएका भ्रष्टाचार, नीतिहीनता र दण्डहीनताका कारण देश झन्-झन् जर्जर हुँदै गईरहेको छ। केहि मान्छेहरु “कत्रा-कत्रा परीवर्तन भए---“ भनेर घमण्डले खोक्छन् तर राजनीतिक परीवर्तन हुनुनै कुनै ठूलो कुरा होईन। राजनीतिक परीवर्तनसंगै प्रणालीबद्ध सामाजिक-आर्थिक विकास र समृद्धि जोडिएर आउन सक्यो भनेमात्रै त्यो राजनीतिक परीवर्तन गर्व गर्न लायक हुन्छ। यतिखेर, देशको राजनीतिक प्रणालीमा जति परीवर्तन भए पनि सत्तासंयन्त्रको काम गर्ने शैलीमा कुनै परीवर्तन देखिएको छैन। आफूलाई नयाँ भनाउने शक्तिहरु पनि पूरानै भ्रष्ट र असक्षम प्रणालीभित्रै आफ्नो भाग खोज्न र त्यसमै रमाउन अभ्यस्त हुन थालेका छन्। एउटा थोत्रो-बिग्रिएको गाडीमा चालक फेरिएजस्तै स्थिति छ अहिले। गाडी नयाँ नबनुञ्जेल थोत्रो-बिग्रिएको गाडीमा चालकमात्रै फेर्दैमा केहि हुनेवाला छैन।नेपाली जिन्दगीका अप्ठेराहरु भोग्ने बानी पार्दैछु। शुद्ध सफा पानीको अभाव र वर्षैभरिको लोडशेडिङ्ग यतिखेरको नेपाली जिन्दगीलाई परिभाषित गर्न सकिने सबैभन्दा सटीक प्रतीक हुन्। हिजोदेखि आजसम्म देश चलाउनेहरुमा अलिकति मात्रै पनि सृजनात्मकता, अलिकति मात्रै पनि संवेदनशीलता भईदिएको भए हामीले पूरै देशमा विद्युतीकरण गरीसकेका हुन्थ्यौं यतिखेरसम्म, तर त्यो हुन सकेन, र अझै केहि समय हुने छाँट देखिँदैन। जबसम्म हाम्रो राजनीति समाजका सबैभन्दा धूर्त र कपटी मान्छेहरुको बन्दी बनीरहन्छ, तबसम्म यो अन्धकार हामीले भोगिरहने छौं।यो पाली वर्षामा पनि दिनको दुई घण्टा लोडशेडिङ्ग कायमै छ। वर्षामै दुई घण्टा भएपछि हिऊँद लागेपछि स्थिति भयावह हुने निश्चित छ। यहाँ मान्छेहरुको मनमा अठाह्र घण्टे लोडशेडिङ्गको स्मृति आलै छ। यो पालि त्यति वा त्यो भन्दा पनि बढी हुने पक्काजस्तै छ। केहि समय पहिला कालीगण्डकीमा समस्या आउँदा एक हप्ताजति दैनिक आठ घण्टे लोडशेडिङ्ग खपियो। त्यसलाई मैले भावी ‘अठाह्र घण्टे’ खप्ने अभ्यासका रुपमा लिएको छु:) फेरि अहिलेको दैनिक दुई घण्टे पनि तालिकाबद्ध छैन। त्यो दुई घण्टा बाहेक पनि बत्ती कतिखेर जाने र कतिखेर आउने ठेगान हुँदैन। यसैले जिन्दगी तालिकामा चलाउन गाह्रो छ।पहिला यहि कुराले त्यति घोच्दैनथ्यो होला, किनभने जिन्दगीको एउटा महत्वपूर्ण भागको रुपमा ईण्टरनेटको उपस्थिति थिएन। अहिले हेर्दा, जिन्दगीका महत्वपूर्ण सम्वादहरु, सम्पर्कहरु सबै ईण्टरनेट आश्रित भईसकेछन्। विशेष गरी पेशागत जीवनका लागि आवश्यक सम्पर्क र सम्वादका लागि अरु माध्यमहरुको प्रचलन लगभग पूरै घटीसकेको छ। फोन एउटा विकल्प हुनसक्छ यदाकदा तर यसका आफ्नै सीमा छन् र यो खर्चिलो पनि हुनसक्छ।हाम्रो ‘संक्रमण’काल यसरी चल्दैछ भने आर्याको पनि आफ्नै संक्रमणकाल चल्दैछ। हामीभन्दा धेरै निश्चिन्त बाल-मनोदशामा बाँचीरहेकाले ऊ खुशीनै छे। शुरुवाती दिनका भाषिक समस्यामाथि बिस्तारै विजय पाउन थालेकी छे उसले, नेपाली राम्रैसंग बोल्ने भईसकी। उसको भाषिक संक्रमणकालको यतिखेरको चरण अनौठो देखिन्छ; उसले नेपाली बोलेको जापानीले नेपाली बोलेको जस्तो लाग्छ भने उसले जापानी बोलेको नेपालीले जापानी बोलेको जस्तो लाग्छ:) ध्वनिगत रुपमा उसको उच्चारण यतिखेर नेपाली र जापानीको ठीक मध्यमा छ। हामी दुईले घरमा कहिलेकाहीँ मात्रै भएपनि ऊसंग जापानी बोलेर उसको जापानी क्षमतालाई बिग्रने नदिने कोशिश गरेको हो, तर त्यो सम्भव हुने छाँट देखिन्न। स्कूल पनि जान थालीसकेकी छे, साथी धेरै बनाएपछि उसले तिब्र गतिमा जापानी बिर्सने निश्चित छ अब।यतिखेर तीजको आगमन नजिकिएको छ र केहि नेपाली टिभी च्यानेलहरुमा तीजका गीत जतिखेरपनि बजिरहेका हुन्छन्। ती गीत हेर्दै नक्कल गरेर नाच्नु उसलाई सबैभन्दा मनपर्ने काम हो यतिखेर। आमाको कुर्थाको शललाई सारी मानेर जीऊमा बेर्न पनि सिपालु भईसकेकी छे ऊ।लोडशेडिङ्ग उसका लागि भने रमाईलो कुरो भएको छ। बत्ती जाँदा “बत्ती गयो--!” भनेर कराउनु र आऊँदा “बत्ती आयो--!” भनेर रमाउनु उसको दिनचर्याका प्रिय गतिबिधिहरुमध्येका बनेका छन्। साँझमा बत्ती जाँदा जम्मा हुने भिडमा हिँड्न उसलाई खुब रमाईलो लाग्छ। सडकमा जताततै देखिने फोहरसंग भने अझै अभ्यस्त हुन सकेकी छैन ऊ। बाहिर निस्कँदा “कुसाई! कुसाई!” (गन्हायो! गन्हायो!) भनेर नाक छोपिरहन्छे। त्यसैगरी गाडीका हर्नको आवाजलाई सहने बानी पनि अझै लागिसकेको छैन।हाम्रा सडकहरुमा देखिने छाडा कुकुरहरु र गाईहरु देखेर भने ऊ खुब खुशी हुन्छे। “ऊ कुकुर!” वा “गाई आयो!” भनेर दंग पर्छे ऊ सडकमा तीनलाई देख्दा।हाम्रो ‘संक्रमण’काल लोडशेडिङ्ग र छाडा सडकले दु:खी छ, उसको संक्रमणकाल यिनैले गर्दा खुशी छ। बच्चा हुन पाउनुपनि गज्जबकै कुरो हो:) Posted by